Halyay Xavi Hernandez Oo Magacaabay Tababaraha Aduunka Ugu Fiican-Muxuu Ka Yidhi Xiliga Uu Shaqada Tababaranimo Bilaabayo. - Gool24.Net
Halyaygii hore ee xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez ayaa magacaabay tababaraha uu arko in uu aduunka ugu fiican yahay.
Xavi Hernandez oo lagu tilmaamo khadkii dhexe ee abid ugu fiicnaa kubbada cagta ayaa la soo shaqeeyay tababarayaal heer sare ah balse hal mid ayuu si gaar ah u magacaabay.
Halyay Xavi Hernandez ayaa sheegay in Pep Guardiola iyo Luis Aragones ay yihiin labadii tababare ee ugu fiicnaa ee uu la soo shaqeeyay balse waxa uu si gaar ah u tilmaamay Guardiola oo hadda gacanta ku haya Man City.
Dhinaca kale Xavi Hernandez ayaa ka hadlay sida uu doonayo in uu ku bilawdo waayihiisa tababaranimo, goobta uu ka bilaabayo iyo waliba halka uu doonayo in uu ku danbeeyo.
Xavi Hernandez oo marka hore ka hadlaya halka uu tababarinada ka bilaabi doono ayaa yidhi: “Fikradu waxay tahay in aan halkan Qatar ka bilaabo waayahayga tababaranimo halkaas oo uu cadaadis yar ka jiro, sidaa daraadeed biyaha ayaan tijaabin karaa oo aan khibrad qiimo leh ka heli karaa”.
“Ka hor inta aanan kama danbaysta ku soo laaban Yurub aniga oo rajaynaya Barcelona. Waxaan u baahanahay in aan socdo ka hor inta aanan ordi karin” ayuu Xavi hadalkiisa raaciyay.
Xavi oo hadafkiisa ugu wayn ka hadlaya ayaa yidhi: “Xaqiiqdii hadafkayga ugu danbeeyaa waa in aan ku dhamaysto noqoshada tababaraha Barcelona, laakiin waxaan u baahanahay in aan xadhkaha barto ka hor inta aanan ka fikirin taas”.
SIDOO KALE AKHRISO: RASMI: Xiddig Ay Real Madrid Ka Afduubatay Barcelona Oo Mustaqbal Fiican Leh Oo Amaah Lagu Fasaxay
Xavi Hernandez oo ka hadlaya tababarihii ugu fiicnaa ee uu la soo shaqeeyay iyo kan aduunka ugu fiican ayaa yidhi: “Waayihaygii ciyaareed waxaan la soo shaqeeyay tababarayaal badan oo fantastik ah oo ka soo bilaamaya min Luis Aragones to Pep Guardiola ,Luis Enrique ilaa Louis Van Gaal”.
“Labada kuwaas oo saamaynta ugu wayn waayahayga ciyaareed ku soo yeeshay waxay ahaayeen Aragones iyo Guardiola. Aniga ahaan, Guardiola ayaa ah ka aduunka ugu fiican”.